Kuratidza zvinyorwa neelebheri machine learning
Semuenzaniso Pix2Pix Edges2 Pikachu
1. Mirira iyo modhi kuti itakure 2. Dzvanya mbeva kuti dhiza Pikachu kuruboshwe kuruboshwe.
3. Iyo Pikachu ruvara mufananidzo anozozviratidza pachena kurudyi rwekrini mumasekondi maviri. Iwe unogona zvakare kudzvanya "Transfer" bhatani kuti uite mufananidzo mutsva. 2. Dzvanya "Deleting" kuti ubvise uye dhiravhodhi zvakare. Zvaitwa!
Muenzaniso muenzaniso unogona kuwanikwa pano.